Madaxweynaha: “Shacabka Hiiraan iyo Sh/dhexe waxaan ugu baaqaya inay dedejiyaan dhismaha maamul ka shaqeeya horumarkooda’’ - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweynaha: “Shacabka Hiiraan iyo Sh/dhexe waxaan ugu baaqaya inay dedejiyaan dhismaha maamul ka shaqeeya horumarkooda’’
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ka furay shirka dar-dar gelinta maamul u sameynta gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan.
“Doorka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee dhismaha nidaamka federaalka waa fududeynta, sharciyeynta iyo inay goobjoog ka noqoto sida loo fulinayo hannaankan, sidaa darteed waxaa halkaa ka cad in shacabku xor u yihiin inay rabitaankooda ku soo dhisaan maamulka ay doonayaan, soona doortaan xubnaha ugu macquulsan ee ay doonayaan inay danahooda matalaan’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
“Dib u heshiisiinta waa tiir ka mid ah tiirarka muhiimka u ah dib u dhiska Soomaaliya. Dalkeena waxaa burburka u horseeday waa siyaasadda oo inaga qaloocantey, sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in la dhiso siyaasad cusub oo dadka mideyneysa, kuna dhisan sinnaan, cadaalad iyo in kheyraadka aan leenahay si wanaagsan looga wada faa’iideysto. Waxaa weli caqabad nagu ah aafooyinkii ay reebeen dagaalada sokeeye oo shacabkeena ku abuuray kalsooni darro iyo kala aamin bax. Waa inaan iska ilownaa wixii la soo dhaafey , iyadoo loo marayo hannaan dib u heshiisiin iyo is cafin ah, kadibna aan diiradda saarnaa sidii aan dalkeena u horumarin lahayn’’, ayuu yiri Madaxweynaha.